Hogaanka Al-Qaacida oo Ku baaqay weerarro ka dhan ah Reer Galbeedka – Radio Daljir
Seteembar 14, 2015 7:08 b 0
Isniin, September 14, 2015 (Daljir) —Hoggaamiyaha Al-Qaacida, Dr. Ayman Al-Zawahiri ayaa Muslimiinta caalamka ugu baaqay inay fuliyaan weerarro ka dhan ah Mareykanka iyo Waddamada kale ee Reer Galbeedka ah.
Al-Zawahiri ayaa ugu baaqay dhallinyarada Muslimiinta inaysan ka walaacin Duqeymaha ay dalalka isbahaysanaya ka geysanayaan Dalalka Ciraaq iyo Suuriya, ayna iska caabiyaan weerarrada ka imaanaya reer galbeedka oo uu ugu horreeyo Mareykanka.
Sidoo kale, Hoggaamiyaha Al-Qaacida ayaa dhallinyarada Muslimiinta ah wuxuu kaloo ku Boorriyay inay Fuliyaan Weerarro la mid ah kuwii lagu Qaaday Wargeyska Charlie Hebdi ee dalka Faransiiska, ayna weeraraan magaalooyinka ku yaalla waddamada Reer galbeedka ah; Gaar ahaan kuwa Mareykanka.
“Waxaan doonaynaa inaan Weerarradeenna u Wareejinno Dalalka Reer galbeedka, Gaar ahaan Magaalooyinkooda waaweyn ee Dalka Mareykanka. Waxaana Dalalka Galbeedka u sheegayaa inaan sida ay u duqeynayaan Waddamada Muslimiinta, aan innaguna u duqeyn doonno Magaalooyinkooda, Aanan u burburinno sida ay kuweenna u burburinayaan… sida ay waxyeeleeyeena aan u waxyeelaynayno kuwooda,” ayuu ku yiri Ayman Al-Zawahiri oo Hadal uu Cajalad kusoo duubay oo lasoo dhigay Baraha Internet-ka.
Dhanka kale, Ayman Al-Zawahiri oo ka Hadlayay Fikirkiisa ku Aaddan ururka ISIS ayaa sheegay inaysan ka mid yahay Urur-weynahooda, Laakiinse uu ku Taageerayo dagaalka ay kula jiraan ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee ku sugan Ciraaq iyo weliba dagaallada ay ka wadaan Suuriya.
Hoggaamiyaha Al-Qaacida ayaa dhanka fariintiisa kaga hadlay dagaallada ay Al-shabaab kawaddo gudaha Somalia, isagoo ku boorriyay kooxda inay Xoojiyaan Weerarrada dhanka ka ah Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
DHAGAYSO: Rag Dhalinyarada ka Tahriibin jiray Puntland oo Bosaaso lagu Soo Bandhigay